Areia: Nzira yekuenda kwaDawn, mifananidzo yakajeka yevhidhiyo mutambo weLinux | Linux Vakapindwa muropa
Areia: Nzira yekuenda kwaDawn, mifananidzo yakajeka yevhidhiyo yeLinux
Areia: Nzira yekuenda kwaedza uyu wakajeka mutambo wevhidhiyo mutambo kubva kuGlip Studio. Izvo zvakaziviswa nguva pfupi yadarika nemugadziri wayo uye inovimbisa zvakawanda, sekureva kwavo. Uyu mutambo wekunakidzwa, uine zvimwe zvinhu zvepuzzle uye chimiro chakanakisa. Vagadziri vayo vanovimbisa kuti iwo mutambo wevhidhiyo nezve manzwiro uye kukura pamweya, nepo nyaya inonakidza ichiitika paunenge uchiongorora nyika inogarwa nemunhu mumwe chete.
Mutambo wevhidhiyo unofanirwa kunge uri chiitiko chinozorodza, chimwe chinhu chitsva kana zvasvika pakutamba muchikamu chinowira mukati mekufungisisa. Uye zvichatogutsa zvakanyanya kune linuxers, sezvo musimudziri akasimbisa kuti ichave neLinux rutsigiro. Pakubvunza muforamu kana Areia: Nzira yekuenda kwaDawn yaizove nechiteshi cheLinux vakazvisimbisa uye vakati zvakare ichave ichiwanikwa kuMacOS.
Panguva ino, iwe unogona kuona rumwe ruzivo pane iyo chitoro peji ye ValvesSteam. Kunyangwe parizvino kungotsanangurwa, karavhani uye zuva rayo rekuburitsa rinoonekwa, izvo ichave pana Ndira 15, 2020. Uye zvakare, izvo zvinodiwa zvinoonekwa zveWindows, asi kwete zveamwe masystem anoshanda, saka inofanirwa kusvika mushure megore rino rekuburitsa kune mamwe ese mapuratifomu. Iko hakuna zvakare mutengo, saka ndechimwe chidimbu cheruzivo chatinofanira kuziva nekufamba kwenguva ...
Nezve avo features inonyanya kuzivikanwa ndeiyi:
Ndiwo mutambo wevhidhiyo zvichibva pamanzwiro kutora mutambi mumwe neimwe neimwe nzira.
ari mifananidzo yemitambo iri yemhando yepamusoro kupa ruzivo rwakanyanya kunyudza kune mutambi.
ari nzvimbo dzamunoona mumutambo uyu uye nekuvheneka vakachengetwa kusvika padanho repamusoro, vaine fungidziro chaidzo.
Iwo mimhanzi zvakare akaumbirwa chete uyu mutambo wevhidhiyo, ine zvekumabvazuva zvinobata kuunza mamiriro e kufungisisa yakakodzera.
Iwo matanho akagadzirwa neruoko aine dhizaini iyo ichakuendesa kunzvimbo yekuzorora.
Iwe uchaona uye udzidze nezve nyaya yakadzama chii chinovanza mutambo uyu.
Iwe hauzove neHUD panguva yemutambo, nekuti izvo zvinokukanganisa kubva padanho rekuzorora uye kufungisisa kwazvinoitirwa kuti zvikutungamire uye nekudaro tarisa ruzivo rwako pane izvo zvinonyanya kukosha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Areia: Nzira yekuenda kwaDawn, mifananidzo yakajeka yevhidhiyo yeLinux
Iyo itsva vhezheni yeSainzi Linux 7.7 yakatoburitswa